Miasa amin'ny herin'ny masoandro i Melbourne Tram - RayHaber
HomeIZAO TONTOLO IZAOOSEANIA61 AustraliaMiasa momba ny herin'ny masoandro i Melbourne Tram
Miasa momba ny herin'ny masoandro i Melbourne Tram
30 / 07 / 2019 Levent Elmastaş 61 Australia, IZAO TONTOLO IZAO, Railway, ANKAPOBENY, KENTİÇİ Rail Systems, OSEANIA, tram 0
mandeha ny kamiao melbourne amin'ny herin'ny masoandro
Melbourne, renivohitry ny fanjakan'i Victoria, izay mikendry ny hampitombo ny tanjaky ny angovo azo havaozin'ny 50 isan-jato, dia miasa ny tamba-jotra manontolo amin'ny tanàna miaraka amin'ny angovo azo avy amin'ny masoandro.
Melbourne, tanàna faharoa lehibe indrindra any Aostralia, dia nanomboka nandefa ny tamba-jotra tramn'ny tanàna iray manontolo miaraka amin'ny angovo azo avy amin'ny masoandro.
Neoen Numurkah Solar Power Plant, nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny herinandro lasa, dia miteraka 100 ny salan'isa angovo azo havaozina hiasa amin'ny tambajotra tram lehibe ao an-tanàna. Namboarina io fitaovana io mba hanomezana herinaratra herinaratra 255 arivo an'arivony isan-taona. Namatsy vola ny tetikasa trolika Solar Trolley Initiative ny tetikasa.
390 mitovy amin'ny fambolena hazo an'arivony
Noho ny fanatanterahana an'ity tetikasa ity dia hanana tram voadio sy feon'ny fieritreretana tsara kokoa ny mponina ao Melbourne. Ny fitrandrahana karbônina izay hihena ny fantsom-pamokarana herinaratra vaovao dia mitovy amin'ny fanesorana ny fiara 750 arivo amin'ny lalana na ny fambolena manodidina ny hazo 390 arivo. Victoria, renivohitr'i Melbourne, dia nametraka ny tanjaky ny angovo azo havaozina ho 2025 ka hatramin'ny 40 ary 2030 hatramin'ny 50. Ity tetik'asa angovo azo avy amin'ny masoandro ity dia raisina ho dingana iray lehibe amin'ity lafiny ity. (ny Dünyahal)
Sari-mahery mandeha amin'ny solosaina avy any IETT 20 / 08 / 2015 fiara fitateram-bahoaka Powered by angovo avy amin'ny masoandro İETT: Istanbul Herinaratra Tramway sy Tionelin'i Enterprises (IETT) Voalohany Torkia masoandro-tanàn-dehibe Powered fitateram-bahoaka mivoatra bisy izy, dia nanao tamin'ny voalohany. Tiorkia voalohany masoandro-bahoaka Hopetahana fiara fitateram-bahoaka tao Istanbul Electricity Tramway sy Tionelin'i Enterprises (IETT) dia napetraka ara-potoana lasa ny. Ny fiara fitaterana mpanamory fiaramanidina, izay hamonjy angovo sy solika, no nanao ny dia voalohany teo amin'i Topkapı sy Eminönü. Ny fiara fitaterana, izay manintona ny saina amin'ny toetran'ny tontolo iainana, dia manana ny totalin'ny angom-panohanana 15 ao amin'ny vala. Ny fiara fitateram-bidy dia tsy miteraka ny fiakaran'ny mari-pana satria tsy mamoaka ny gazy karbonika izy satria miteraka angovo azo havaozina rehefa mamonjy pilina. Mpiaro ny tontolo iainana ...
Ny fiaran-dalamby rehetra any Holandy dia mihazakazaka amin'ny fahefan'ny rivotra 12 / 01 / 2017 Ny fiaran-dalamby rehetra any Holandy dia mihazakazaka amin'ny herinaratra: ny fiarandalamby elektrônika dia manome safidy fitaterana maharitra kokoa raha ampitahaina amin'ny fiarakodia satria miteraka kely izy ireo. 1 Janoary Tamin'ny 2017, nitatitra ny orinasan-dalamby nasionalin'ny lamasinina Holandey fa ny tetikasa 10 taona dia notanterahana niaraka tamin'ny Eneco, orinasa mpamokatra herinaratra, hanatanteraka ny fiaran-dalamby rehetra ao amin'ny firenena amin'ny alàlan'ny rivotra. Ireo orinasan-dalamby nasionalista Holandey, izay te-hampihenana ny fivoahana amin'ny alàlan'ny fiarandalamby, dia niara-niasa tamin'ny Eneco tao amin'ny 2015. Araka ny tetikasa, ny fampiasana angovo azo havaozina 100 dia nomanina ho amin'ny 2018, fa raha vao tonga tamin'ny 2016 ny 75, ny drafitra drafitra
Vizana tsy nampoizina 22 / 09 / 2015 Ny fiaran-dalamboaran'ny rivotra dia manaitra: Ny teknolojia momba ny tontolo iainana novolavolaina mba hisorohana ny fiovaovan'ny toetrandro tampoka vokatry ny fiakaran'ny hafanana dia manosika ny fetran'ny fanavaozana. Nanamboatra fiaran-dalamby ny orinasa Holandey, raha nanangona solosaina ho an'ny herinaratra ao Korea Atsimo sy Angletera kosa ny solosaina masoandro. Ny teknolojia maoderina novolavolaina mba hanesorana ireo gazy voaaro izay manohintohina ny tany dia nanomboka nampihena ny loza ateraky ny fiakaran'ny mari-panan'ny tany. Ireo firenena mandroso sy ireo marika manerantany dia nanamboatra fiarandalamby izay miasa ao amin'ny tontolo maitso maitso, ny seranam-piaramanidina izay mandray ny ankamaroan'ny angovo avy amin'ny masoandro, ny lalana omena amin'ny teknolojiam-pifandraisan-davitra, ny foibe sy ny seraseran'ny masoandro. Ireo teknolojia miavaka indrindra manerana izao tontolo izao ...
Ny Konak Tram Project dia hanaisotra tanteraka ny ranomasina 07 / 01 / 2014 Ny tetikasa Konak Tram dia hanafoana tanteraka ny fifandraisana amin'ny ranomasina: Ny tranoben'ny Architects Izmir Sampana Hasan Topal dia nilaza fa mbola miala ny ranomasina miaraka amin'ny lalam-piaramanidina 6 ny tanàna ary tsy mahita ny zo hanampy tram-barazy. Ny efitrano fandroana ao Izmir dia naneho hevitra mikasika ny fizotran'ny lalana Fahrettin Altay-Konak-Halkapınar, izay nomanin'ny komity ao İzmir Metropolitan ary nanambara fa hivarotra ny 26 amin'ny Febroary. Ny filohan'ny Antenimieran-tsambo ao amin'ny Izmir Branch Hasan dia nanambara fa mbola miala ny ranomasina miaraka amin'ny lalam-piaramanidina 6 ny tanàna ary tsy mahita ny zo hanampy tram-baitra
Manao fitokonan'ny mpandeha an-tongotra any Melbourne 10 / 08 / 2015 Nitokona ireo mpiasan'ny Railway Melbourne: Nanapa-kevitra ny hitokona nandritra ny roa andro ny sendikàn'ny mpitrandraka lalamby ao Melbourne. Nilaza ny manam-pahaizana fa ny fitokonana roa andro momba ny fiarandalamby, izay mitana anjara toerana lehibe amin'ny fitaterana ny tanàna, dia mety hampihena ny fifamoivoizana an-tanàna. Fifamoivoizana sy Bus Union, ny fanapaha-kevitry ny fitokonan'ny mpikambana ao amin'ny RTBU dia hanimba tanteraka ny Metro Trains. Noho ny fitokonana dia tsy ho vita amin'ny ora 48 ny kaontenan'ny tapakila, hijanona ny varavaran'ny tapakila. Ankoatra izany, ny fiaran-dalamby dia afaka miala sasatra izay mila mijanona. Ny sendikan'ny RTBU, solontenan'ny mpiasa, dia efa nifanandrify tamin'ny tompon'andraikitry ny lalamby tamin'ny karaman'ny mpiasa. Sekretera iraisam-pirenena Luba ...
Ny fitaterana an'i Kayseri dia voavonjy amin'ny 1 an-tapitrisany 121 an'arivony mirehitra 920 an'arivony miaraka amin'ny famokarana anatiny
Asa Asphalt Ceyhan ao amin'ny Avenue 20
Sari-mahery mandeha amin'ny solosaina avy any IETT
Ny fiaran-dalamby rehetra any Holandy dia mihazakazaka amin'ny fahefan'ny rivotra
Vizana tsy nampoizina
Ny Konak Tram Project dia hanaisotra tanteraka ny ranomasina
Manao fitokonan'ny mpandeha an-tongotra any Melbourne
Ny Rail Railway Fair 2012 Australia - Melbourne
Mihabetsaka ny tontolon'ny masoandro, Izmir nandresy
Famaranana ny asa ho an'ny famokarana serivisy ho an'ny haingon-tseranana
Manomboka amin'ny angovo azo avy amin'ny masoandro ny ESHOT
«Jona Aug »